उत्तर कोरियाद्वारा अमेरिकी द्वीप गुआममा मिसाइल हमलाको चेतावनी - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ श्रावण २०७४, बिहीबार ११:१९ |
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको धम्कीलार्इ विश्वले नै नयाँ अनुभव गर्ने गरी जवाफ दिने बताएका छन् । ट्रम्पको यस कडा चेतावानीको प्रतिक्रियामा उत्तर कोरियाले अमेरिकी द्वीप गुआममा मिसाइल हमलाको तयारी गरेको बताएर तनाव अझै बढाइदिएको छ । गुआममा एक लाख ६३ हजार मानिसको बसोबास रहेको छ ।
यी सारा घटनाक्रमा तीब्रगतिमा विकसित भइरहँदा उत्तर कोरियाले साना परमाणु हतियार र अन्तर महादेशीय मिसाइल प्राप्त गरिसकेको छ । अर्को विवरण अनुसार उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार अन्तर महादेशीय मिसाइलका लागि तयार भइसकेको छ । यस्तोमा अमेरिकाको तनाव पनि चुलिँदै गइरहेको छ ।
सैन्य संघर्षको आंशका ?
तर पनि विष्लेशकहरूले यस मामिलामा सर्वसाधरणले आतंकित हुने कुनै जरूरी नरहेको बताएका छन् । धम्की दिइरहेको उत्तर कोरिया र अमेरिका दुवै अहिले नै युद्ध गर्ने मुडमा भने देखिएका छैनन् ।
यी सबै घटनाक्रम भइरहँदा अहिले नै विश्वजगतले त्रसित हुनु नपर्ने बताइएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध कुनै पनि पक्षको हितमा छैन । उत्तर कोरियाली सरकारको मुख्य लक्ष्य आफ्नो अस्तित्व बचाउनु रहेको छ ।
यस्तोमा अमेरिकासँग गरेर उत्तर कोरिया स्वयमले जोखिममा हाल्न चाहँदैन। बीबीसीका सामरिक संवाददाता जोनाथन मार्कसका अनुसार अहिलेको अवस्थामा अमेरिका र उसका सहयोगीमाथि उत्तर कोरियाले कुनै पनि किसिमको हमला गर्ने भन्दै प्रोपोगान्डा मात्रै गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो अवस्थामा उत्तर कोरियाले आत्मघाती कदम उठाउने छैन ।
वास्तवमा अहिले अमेरिकालार्इ तनाव भएको विषय उत्तर कोरिया स्वयम परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्नका लागि कडा मेहनत गरिरहेको छ । यदि यो क्षमता उसँग भयो भने किम जोङ्ग उन सरकार तनावको अवस्थामा आफूलार्इ बचाउन सफल हुनेछ ।
किम जोङ्ग उन लिबियाका पूर्वशासक गद्दाफी र इराकका सद्दाम हुसेनको बाटोमा जाने मनस्थितिमा पनि छैनन् ।
दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा कुकमिन यूनिभर्सिटीका एन्ड्रेई लङ्कोभले बेलायती पत्रिका गार्जियनसँग कुरा गर्दै अहिले नै युद्धको सामान्य आशंका छ । तर यसका साथै समान रूपमा उत्तर कोरियाली समस्याको समाधान अहिले शक्ति राष्ट्रहरू राजनीतिकरूपमा हल गर्ने मनस्थितिमा पनि देखिएका छैनन् ।
लङ्कोभले उत्तर कोरिया पहिले अमेरिकाको मानचित्रबाट शिकागोलार्इ मेटाइदिन चाहन्छ, त्यसपछि मात्रै उनीहरू राजनीतिक समाधानको इच्छा जनाउनेछन् ।
अमेरिकाले उत्तर कोरियामा हमला गरेरमा उत्तरले उसका सहयोगी जापान र दक्षिण कोरियालार्इ निशाना बनाउने प्रष्ट बुझेको छ । यसको परिणाम भनेको ब्यापकमात्रामा मानिसले ज्यान गुमाउनेछन् ।
यिनमा हजारौँ अमेरिकी पनि मारिनेछन् । यी अमेरिकी जापानमा सैनिक र नागरिकका रूपमा रहेका छन् । यसका अलावा अमेरिका परमाणु हतियारले लैस मिसालइल उसको भूमिका खसेको देख्न पनि चहाँदैन ।
उत्तर कोरियाको एकमात्र साथी चीन हो । चीन उत्तर कोरियाली प्रशासनलार्इ सम्हाल्ने काममा पुरै सक्रिय हुनेछ । उत्तर कोरियाको अहिलेको शक्ति सकिनु भनेको चीनका लागि पनि हानिकारक हुनेछ ।
किम जोङ्ग उनको पतन हुनु भनेको चीनका लागि सामरिक रूपमा ठुलो क्षति हुनेछ । अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सैनिकले चिनियाँ सिमाना पार गर्ने अवस्था निम्तनेछ । तर चीन कहिल्यै पनि यस्तो चाहँदैन ।
केवल मुखको लडाइँ या कारबाही पनि ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भलै उत्तर कोरियालार्इ असामान्य भाषामा चेतावनी दिएका छन् तर अमेरिका पनि कुनै सक्रिय युद्धमा होमिनुपर्ने पक्षमा अहिले छैन ।
नाम नलेख्ने शर्तमा समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग एक अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्, ‘वक्तब्यबाजी बढ्नुको मतलब युद्ध हुनु होइन ।’ न्यूयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार म्याक्स फिसर पनि यसमै सहमति जनाउँदै भन्छन् ‘हामी कुनै पनि टिप्पणीको आधारमा युद्ध हुन लाग्दैछ भन्न सक्दैनौँ ।’
जुलाईमा उत्तर कोरियाको तर्फबाट दुर्इ अन्तर महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइलको परीक्षणपछि अमेरिका उसमाथि संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत लगाम कस्न चाहन्छ । अमेरिकाले रणनीतिक विधि अपनाएर युएनमार्फत उत्तर कोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।
अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि संवादका लागि कोशिश गरिरहेको छ । कुराकानी अघि बढाउन चीन र रूससँग पनि उसले सयहोग खोजिरहेको छ ।
यसका बावजुद केही विश्लेषकले भने वर्तमान तनावको माहोलमा एउटा अपरिपक्व कदमले युद्धको आगोगमा झोस्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएशनका अमेरिकी थिङ्क ट्यांक डारल किमबोलले भनेका छन्, ‘युद्धभन्दा अघि उत्तर कोरियाको बिजुली गायव हुन सक्छ । र, यो युद्ध भन्दा पहिलेको एउटा गल्ती हुनेछ। अमेरिका यहाँ गल्ती गर्न सक्छ । यहाँ सबै पक्षलार्इ समझदारीमा राखिरहन कठिन छ । यदि यस्तो भयो भने अहिलेको अवस्था शक्ति राष्ट्रको हातबाट बाहिर जानेछ ।
अमेरिकाका पूर्व उपविदेशमन्त्री पीजे क्रावलीका अनुसार अमेरिका र उत्तर कोरिया सन् १९९४ मा सैन्य संघर्षको नजिक पुगेका थिए । त्यो बेला उत्तर कोरियाले उसको परमाणु सन्यन्त्रमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकलार्इ आउन दिएको थिएन ।
त्यसपछि उत्तर कोरिया अहिलेसम्म रोकिएको छैन । उसले लगातार अमेरिकाविरूद्ध कुनै न कुनै कदम उठाइरहेको छ । यसका साथै उसले जापान र दक्षिण कोरियालार्इ बेला बेलामा युद्धका लागि उकासिरहेको छ । धेरै पटक उत्तर कोरियालार्इ अमेरिकाले आगो समुद्रमा हालिदिने धम्की पनि दिइसकेको छ।
यस्तोमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको धमकी कुनै अप्रत्याशित भने होइन भलै उनको शैली फरक छ । पूर्व अमेरिकी उप विदेशमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘अमेरिकाले सदैव यदि उसले आफूलार्इ आक्रमणको कोशिश गर्यो भने त्यहाँका वर्तमान शासनको अन्त्य हुने बताउँदै आएको छ।
Previousभारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज काठमाडौँमा
Next‘ट्युबलाइट’ नचलेपछि सलमानले बुझाए क्षतिपुर्ति
७ मंसिर २०७२, सोमबार ०५:५०
संविधानसभा र सभासद हाँसो मजाकको पात्र : नेपाल
३ चैत्र २०७१, मंगलवार ०९:०८